Ukwenza ingxelo ngeengxelo zeCrystal 10
Xa uqala iiNgxelo zeCrystal 10, ngokubanzi ufuna ukwenza enye yezinto ezintathu: yenza ingxelo, uguqule ingxelo, okanye uqhube ingxelo ngokuchasene nedatha kwindawo yogcino lwedatha. Iingxelo zithatha idatha kwindawo yogcino lwedatha, ziyicwangcise, ziyifomathile, kwaye emva koko ziyikhuphele kumshicileli, kwikhompyuter, okanye kwiWebhusayithi.
Iingxelo zeCrystal iza nesiseko sedatha onokuyisebenzisa xa usenza. Sisiseko sedatha yokuFikelela kukaMicrosoft kwinkampani ebubuxoki egama linguXtreme Mountain Bikes Inc.
Inkqubo ye- xtreme.mdb Ugcino lwedatha luqulathe inani leetafile zedatha ezimele iitafile ezinokuthi zigcinwe ngumenzi webhayisekile wokwenene. Iitafile zizaliswe ziisampulu zedatha onokuyisebenzisa kwaye uyibonise ngeNgxelo yeCrystal. Ungasebenzisa le datha yesampulu njengesiseko sengxelo yakho yokuqala.
Ukwenza ingxelo, kufuneka wazi izinto ezimbalwa:
Zeziphi iitafile kwiziko ledatha ezinedatha oyifunayo
Zeziphi izinto zedatha ozifunayo kwezi tafile
Zeziphi iindlela zedatha ekufuneka zenziwe ukukunika ulwazi olufunayo
Ufuna ukuba ingxelo yakho ifomathiwe njani
Nokuba abasebenzisi bengxelo yakho bayayifumana kwakhona kumshicileli omnyama nomhlophe, umshicileli wemibala, isikrini sekhompyuter, okanye iwebhusayithi
Ukulungiselela iinjongo zale ntshayelelo (kwaye okwangoku), cinga ukuba sele uzazi zonke ezo zinto.
Ukuqala kweNgxelo zeCrystal 10
Mhlawumbi ukhethe iiNgxelo zeCrystal ngenxa yokuba unedatha equlathe ulwazi olubalulekileyo kuwe. Ngawo onke amathuba, idatha ekwiziko ledatha iyatshintsha ngokuhamba kwexesha, kwaye ufuna ukubanokwazi ukugcina imeko yayo yangoku. Wena unakho fumana ulwazi olufunayo ngokwenza imibuzo ye-SQL, kodwa loo nto ingangaphezulu kakhulu njengomsebenzi. Kungcono kakhulu ukwenza ingxelo ngeeNgxelo zeCrystal, kwaye emva koko usebenzise ingxelo ngalo lonke ixesha ufuna imeko yamva nje yolwazi olunomdla. Kuya kufuneka uyenze ingxelo kube kanye kuphela, kodwa ungayiqhuba amaxesha amaninzi, ufumane iziphumo zamva nje ngokulandelelana ngokulandelelana. Awunyanzelekanga ukuba ufunde i-SQL okanye nayiphi na enye indlela yokukhupha idatha kwiziko ledatha. Iingxelo ezenziwe ngeNgxelo zeCrystal kulula ukuzakha, zifundeka ngokulula, kwaye kulula ukuziqonda. Yintoni enokuba ngcono?
Inyathelo lokuqala lokwenza ingxelo kukumilisela iiNgxelo zeCrystal kwimenyu yokuqala yeWindows. Xa usenza njalo, kuvela iNgxelo yeCrystal iwindow ephambili, ebonisa ibhokisi yencoko yababini eyakwamkela kwiiNgxelo zeCrystal.
Uyamenywa ukuba ukhethe kwizinto ezintathu onokukhetha kuzo. Unokwenza uxwebhu lweNgxelo zeCrystal usebenzisa iWizard yeNgxelo okanye ngokuqala ngengxelo engenanto. Ngenye indlela, unokuvula ingxelo esele ikhona, nokuba ungayitshintsha okanye uyiqhube.
Nangona iWizard yeNgxelo inokuba lixesha- kwaye isindise abasebenzi, iyayinyanzela ifom yengxelo. Ke esi sahluko sikusa ngqo kwinqanaba kwaye sibonise ukuba ungayenza njani ingxelo eyakho indlela, ukuqala kwingxelo engenanto endaweni yokusebenzisa iWizard yeNgxelo.
Sebenzisa ukhetho lweNgxelo engenanto
Ukwenza ingxelo kwangoko, ukuqala ngenketho engenanto, landela la manyathelo:
1. Qala iiNgxelo zeCrystal.
Wamkelekile kwibhokisi yencoko yababini yeengxelo zeCrystal.
2. Khetha njengeNgxelo engenanto, emva koko ucofe iqhosha u-OK.
Ibhokisi yencoko yababini yeNgcali yeDatha iyavela, ebonisa indawo ezinokwenzeka ukufumana umthombo wedatha yakho.
3. Kwisahlulo seMithombo yeDatha eFumanekayo, cofa uphawu oludityanisiweyo ngasekhohlo kwifayile Yokwenza Uqhagamshelo Olutsha ukuze ulwandise.
Le yifolda oyikhethayo nanini na xa usenza ingxelo kwasekuqaleni. Xa uqhagamshele kwindawo yogcino lwedatha, iiNgxelo zeCrystal zikhumbula ukuba ziphi.
4. Cofa kabini kuhlobo lwedatha oluhambelana nomthombo wedatha yakho.
Iingxelo zeCrystal zamkela iintlobo ezahlukeneyo zedatha. Kuya kufuneka ukhethe efanelekileyo. Ukuba awazi ukuba loluphi uhlobo oluchanekileyo, cela umntu oqheleneyo nomthombo wedatha. Ukulandela kunye nomzekelo, cofa kabini ukufikelela / kwi-Excel (DAO). Ibhokisi yencoko yababini yokuFikelela / ye-Excel (DAO) iyavela, ebuza ukuba ungaqhagamshela njani kumthombo wedatha yakho.
imifanekiso yeepilisi zeed addall
Cofa iqhosha ellipsis (…) ekunene kwebhokisi yegama ledatha.
Ukufikelela kunye neefayile ze-Excel kwinkqubo yakho ziyavela. Lo mzekelo usebenzisa ifayile yedatha yokufikelela enegama elingu-xtreme. Oku kunokuba kungabi lula njengoko kuvakala - ifayile ibekwe kwi-D: Inkqubo yeFayileCrystal DecisionsIingxelo zeCrystal 10SamplesEnDatabasesxtreme.mdb.
Kuya kufuneka ukhangele ukufumana le fayile kwindlela yakho.
6. Cofa iqhosha lokugqiba.
Ingcali yedatha iyavela kwakhona, kunye ne-xtreme database edityanisiweyo.
7. Yandisa iitable node, emva koko ucofe kabini kwitafile ofuna ukuyisekela kuyo ingxelo yakho.
Umthi kwisahlulo seMithombo yeDatha efumanekayo ineenombolo ezininzi, ezinye zazo zisuka kwamanye. Yonke imithombo yedatha inezine zezi ndawo zixhomekeke kuyo: Yongeza uMyalelo, iitafile, umbono, kunye neenkqubo ezigciniweyo.
8. Ukulandela kunye nomzekelo, yandisa iiTable node kwaye ucofe kabini uMveliso.
Ukwenza iikopi kwitheyibhile yeMveliso kwiifayile zemithombo yeDatha ekhoyo kwiTafile ekhethiweyo yeetafile.
9. Cofa kwindawo ethi Kulungile ukuvala iVenkile yeDatha.
Ingxelo engenanto igcwalisa ifestile.
Ithebhu yoyilo (kwicala lasekhohlo) ibonisa amacandelo amahlanu engxelo:
Ingxelo yeNtloko: Kubonakala kuphela phezulu kwengxelo kwaye yinto yokuqala ayibonayo umbukeli.
Umxholo wephepha: Ivela ngezantsi kwengxelo yentloko kwaye phezulu kuwo onke amanye amaphepha akule ngxelo.
Iinkcukacha: Owona mxholo wengxelo.
Ingxelo yecandelo elisezantsi: Ivela emva kolwazi lokugqibela olunengxelo.
Umbhalo osezantsi ephepheni: Kubonakala emazantsi ephepha ngalinye lengxelo.
amayeza ukurhawuzelela ulusu
hlala uhlala kwinkqubo yakho
generic yezixhobo ze-thyroid
Idlalwa njani i-bongo
Igama lesiqhelo le fosamax